Fikarohana momba ny firaisana Burt Reynolds ho Fampisamboarin'i Douglas Fairbanks: A Legend Hollywood and Stuntman in Two Lifetimes with Life's Future of Jimmy Fallon - Research Reincarnation
Burt Reynolds ho fampisehoana indray ao amin'ny Douglas Fairbanks: A Legend Hollywood and Stuntman in Two Lifetimes with Life's Future of Jimmy Fallon
Hollywood Legend Douglas Fairbanks niorina indray tamin'ny Burt Reynolds
Rehefa nisy mpankafy iray tao amin'ny vohikalanay dia nandefa ny fitsapana Burt Reynolds dia ny fanamboarana indray ny sarimihetsika mangina Douglas Fairbanks, Gaga aho, nefa nahatsapa ihany aho fa marina izany.
Hitako fa manana rafitra fomban-tarehy toy izany i Fairbanks sy Reynolds. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Ankoatr'izany, dia samy niasa tamin'ny sarimihetsika, atleta izy ireo ary nanao ny sarimihetsika ara-batana manokana tao amin'ny sarimihetsika.
Ao amin'ny fivoriana iray miaraka amin'ny media malaza tranainy malaza Kevin Ryerson, Ahtun Re, mpitari-dalana ho an'ny mpanjifan'i Kevin izay naneho ny fahafaha-manao ny fiainana taloha, dia mifanaraka amin'ny marina fa marina i Burt Reynolds tamin'ny taonjato fahafolo taorian'i Douglas Fairbanks.
Douglas Fairbanks | Burt Reynolds ao anaty soavaly mirehitra: Tongotra kely toy izany!
Ny mahaliana, amin'ny faran'ny fampisehoana mahatalanjona Mel Brooks, Saddles lava, ny toetran'i Harvey Korman dia mihazakazaka mamakivaky ny dian-tongotr'i Douglas Fairbanks ao amin'ny Hollywood Walk of Fame. Nijanona i Korman, dia nitodika ka niantso hoe: "Ahoana no nanaovany ireo kiraro mahavariana ... niaraka tamin'ny tongotra kely!"
Azonao ampiana hoe: "Amin'ny vanim-potoana roa!"
Sheriff Buford T. Justice, izay nalain'i Jackie Gleason, navaozina tahaka an'i Jimmy Fallon
Angamba ny anjara toetran'i Burt Reynolds tsara indrindra dia ny Bandit tao amin'ny andian-tantara sarimihetsika Smoky sy ny Bandit. Smokey no anaram-bosotra nataon'ny Sheriff Buford T. Justice tao amin'ny sarimihetsika sarimihetsika, izay noraisin'ny komisiona lehibe Jackie Gleason. Ny fijoroana vavolombelona indray ao Gleason indray dia fantatra ho mpilalao comédie sy talk show, Jimmy Fallon. Raha te hianatra bebe kokoa, azafady mankany:
Trangam-panjakan'olo-tokana nataon'i Jackie Gleason | Jimmy Fallon
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny endriky ny endrik'i Douglas Fairbanks sy Burt Reynolds dia mitovy, toa an'i Jackie Gleason sy Jimmy Fallon.
Ny fiainana taloha talenta: Douglas Fairbanks dia mpikomy, nitarika ny lehilahy tamin'ny vanim-potoana mangina tao Hollywood, tahaka an'i Burt Reynolds tamin'ny vanim-potoana maoderina ankehitriny. Jackie Gleason sy Jimmy Fallon dia sarimihetsika fampihetseham-batana amin'ny fihodinana faharoa.